ONLF, oo Qaaday Istiraatijiyadii Guusha – Rasaasa News
ONLF, oo Qaaday Istiraatijiyadii Guusha
Minneapolis, Apr 15, 2014 – Jabhada ONLF, ee u dagaalanta xoraynta degaanka Somalida Ogadenia, ayaa bilowday hawlo muhiim ah oo ay ku dardargalinayo toosinta iyo turxaanbixinta halganka ay jabhadu ku jirto.
Jabhada ONLF, oo sanooyinkan ay saaraayeen niyad jab iyo kala daadsanaan kaga yimid dhinaca Atoobiya iyo shacabka Somalida Ogadenia, ayaa muujinaysa dadaal hor leh oo niyad wanaagsan. ONLF, ayaa wada siminaaro ay ku xoojinaya awooda maamulka iyo adkaynta istiraatijiyada ururka, kuwaas oo ay ka wado dalalka reer galbeedka.
Xog aanu ka helay xubno ka tirsan ururka ONLF, oo saldhigoodu yahay Waqooyiga Maraykanka oo ka gaabsaday in magacooda la sheego, ayaa noo xaqiijiyey in ururku badalay istiraatijiyadii uu hore ugu shaqayn jiray. Masuulka ayaa sheegay in wax laga badalay dhamaanba hanaankii Istiraajiyadeed ee ONLF ku shaqayn jirtay, taas oo jawaab u ah wakhtiga iyo isbadalka siyaasadaha ku wajahan halganka.
Ururku wuxuu awooda saarayaa kobcinta aqoonta iyo fahamka halganka, isaga oo tababaro gaar ah siinaya xubno dhiig cusub leh, kuwaas oo loo diyaarinayo hinjinta halganka mustaqbalka. Waxaa kale oo garab socda baraarujin hoose oo uu ururku ka dhex wado bulshada Ogadenia, isaga oo tusaya waxyaabo badan oo ku saabsan lama huraanimada xoraynta Ogadenia. Baraarujinta bulshada waxaa wada xubno kasban kara dadka oo aqoon leh, lana socda siyaasada halganka iyo siyaasada Atoobiya.
Ururku wuxuu joojiyey in warbaahinta lagu qoro magacyada masuuliyiinta, aan la aqoon ee ururka ah iyo kuwa cusub ee ku soo biira halganka. Arintan waxaa looga dan leeyahay in lagu badbaadiyo ehelada xubnaha ururka ONLF, ee jooga degaanka Ogadeeniya. Waxayna jawaab u tahay, ka dib kolkii uu maamulka kilalku shaqaaleeyey, xubno Liyuu Boliis [LB] oo Qurbo joog ah, kuwaas oo dhib ku haya shacabka gudaha iyo dadka Qurba Jooga ah ee Somalida Ogadeeniya.
Istiraatijiyada kale ee ururku qaatay waxaa ka mid ah, in halganka looggaga faa,iideeyo shacabka Somaliya, ka dib kolkii daraasad lagu ogaaday in shacabka Somaliya haatan u dhaga nugul yahay halganka ay wado ONLF. Aqoonleyda Somaliya waxay aragtaa in Atoobiya ay qabsanayso dalka Somaliya, khaladna ay ahayd in kolkii horeba gacmaha laga laabto ka qayb qaadashada halganka gobonimo doonka ah ee ka socda Ogadenia, kaas oo horeba shacabka Somalida oo dhan uga qayb galeen. Waxaa kale oo kilalaka laga faa,iiday sheegida degmooyinka ee beelaha Somalida, isaga oo beel walba geeya degmada ay leedahay, taas oo muujisay in beel walba oo Somali ah ay degaan ku leedahay Somalida Ogadenia, beelaha Somaliduna ay yihiin dadka uu gumaysigu dhibaateeyo.
Istiraatijiyada kale ee ONLF qaadatay oo ah midka ugu muhiimsan, waa dhismaha nidaam dawli ah. ONLF, waxay magacaabaysaa xubno siyaasiyiin ah oo wakiil uga noqon doona dalalka dibada [safiiro], meeshii awal hore ay gudoomiyaha Jaaliyaadku wakiilo u ahaayeen Jabhada. Jaaliyaadka iyo wakiilada Jabhada ayaa wada shaqayn doona iyaga oo kala madax banaan. Sida aan ka soo xiganay xubinka Minyaapulis, wakiilada Jabhada ayaa garaaci doona albaabada siyaasada iyaga oo u shaqayn doona si dawladeed iyaga oo wata magaca safiir.
ONLF, waxaa kale oo ay Istiraatijiyad u qaadatay uruurinta taariikhda halganka, iyada oo la abuurayo gudiga qoraalada iyo taariikhda. Waxaa kale oo ay qaadatay in maadaama uu halganku soddon jirsaday sano  diirada la saaro in qoraal wax lagu fahamsiiyo dalalka aan la socon halganka.
ONLF, waxaa kale oo ay wax ka badashay, gulufkii dagaalka arintaas oo ayna sheegin hanaanka dagaal ee ay la galayso Atoobiya.
Kobcinta maamulka iyo tababrada ay ku qaadanayaan xubnaha ururka ONLF, dalalka taageera halganka Ogadenia, ayaa sii kordhaya labadan sano ee ugu dambaysay, waxaa kale oo aad u xoogaysanaya dhalinyarada ku dhalatay dibadaha oo uu fahamkoodu aad u sareeyo aadana uga qaybqaadanaya halganka 30 jirsaday ee ay wado ONLF. Waa lama huraan in dardarta iyo dadaalka is-huwan ee kobacu ka muuqdo ee ay wado ONLF, in uu ebyo xornimada ay Ogadenia ku taamaysay sanooyinka badan.
Somalia: Dhacdadii Gabiley oo Dheeha ka Qaaday Maamulka Somaliland
War Ded Dega: Ciidanka Maamulka Somaliland oo Weerar ku ah Taleex